Zavamaniry an-tsambo mitentina tsy manam-paharoa amam-borona, sakamalaho famonosana, rano fisaka azo entina amidy | Mifalia
Fanamboarana tranokala matihanina sy tranobe azo afangaro amin'ny tanety.
Lay iglo Igloa
Tranolay misy doka
Tranolay misy voromailala
Tranolay misy lay inflable
Fanatanjahantena tsy azo antoka
Doka azo inoana
Zavamaniry azo tanterahina
30 ° 30 m Lava: 1500kg
JOY dia mpanamboatra matihanina ho an'ny zaridaina misy inflatable, tranobe misy inflatable ary kitapo stunt hatramin'ny 2001.
Ny vokatra lehibe dia misy ny fantson-drano mikoriana, ny zaridaina mitsingevana, ny fipoahana lay, ny fanatanjahan-tena mihetsika, ny airbag stunt, ny dokambarotra azo ampiasaina, sns.
PVC Outdoor Dome Camping Bubble Hotel Inflatable Crystal Crystal lay amidy amidy
PVC Air Outdoor Dome Camping Tree Hotely trano fandraisam-bahiny Crystal Cleal Crystal lay. Ny mpanamboatra matihanina matihanina dia mamokatra kalitao avo lenta amin'ny lay. Ny tranolay misy banga mazava dia manana fampiharana marobe toy ny toby, hotely, hetsika fety. Azontsika atao ny manao lay fitobiana amin'ny fitobiana samihafa amin'ny habe samihafa, raisina an-tsaina ny hifandraisana aminay, ny tranolay miboridana am-bidy amidy.
Lay am-pototry ny voromanidina airlatable
Lay an-tsokosoko am-bavaka ao anaty lay ho an'ny toby bozaka ivelany. Ny hafaliana dia mamokatra karazan-javatra isan-karazany amin'ny alàlan'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Raha mitady lay mazava ho an'ny toby ianao, dia aza misalasala mifandray aminay, lay miboridana am-bidy amidy.
Fanapahan-tsolika an-tsokosoko voaroy an-tsokosoko an-tsokosoko
Voapetaka ny tranolay voaroaka an-trano ho an'ny toby any ivelany. Ny taovam-pon'i Shubble dia amidy dia amidy tsara amin'ny tsena iraisam-pirenena ary malaza amin'ny mpanjifa maro. Manana fampiasa isan-karazany izy ireo, toy ny tranolay balaonina ho an'ny toby, lay lay, sns. Mikasa ny hifandray aminay mba hahazoana vidiny.
Snowboard Airbag Landing Landing Pad Seature Bag Job
Snowboard Airbag Landing Pad Security Bag Jump + HTTPS: //www.Joyinflable.com
Fandrindrana: fepetra takian'ny mpanjifa sy ny ahiahy; Hamarino ny lamaody, ny loko, ny habeny, ny asa vita ny vokatra sy ny teti-bolan'ny mpanjifa; Araka ny takian'ny mpanjifa sy ny ahiahy, diniho ny fizarana azo atao na drafitra.
Vahaolana: Ataovy miankina amin'ny takian'ny mpanjifa ny sary kisary 3 D; Hadino ny vahaolana ary mihatsara; Mamolavola lamina famokarana miaraka amin'ny fanamarihana manokana momba ilay vahaolana.
Fanamboarana: Araka ny baikon'ny manufature mba hanintona ny sary sy ny manufature; Araho ny fandaharam-pamokarana ary raiso horonantsary mifandraika amin'ny mpanjifa manamafy; Izahao ny vokatra ary alao ny horonantsary mandritra ny fanadinana.
Aorian'ny varotra / famelabelarana: mandefa horonantsary mifandraika ary mifandraika amin'ny mpanjifa; Delivery; Mandoa fiverenana mitsidika ny fepetra fampiasana.
Ireo horonantsary rehetra ireo dia voatifitra rehefa mitsapa ny vokatra tsy mety voadonan'ny ekipan'ny mpitifitra isika, na ny valin-tenin'ny mpanjifanay ary voatifitra avy amin'ilay sehatra. Hita taratra indrindra ny endrika, ny firafitra, ny fampisehoana, ny loko ary ny fampiasana ny vokatra. Noho izany dia tsara ho antsika ny manatsara ...
Ny Guangzhou Joy Inflatable Limited dia orinasa izay manampahaizana manokana ao amin'ny zaridaina misy inflatable, tranolay azo itodihana ary kitapom-bato. Afaka manolotra anao vahaolana sahaza anao ho an'ny toerana misy anao izahay. Ity dia mety ho fitambaran'ny vokatra manokana izay mifanentana anao amin'ny tarehimarika, ny teti-bola ary ny refy. Noho ny zavatra niainantsika tato anatin'ny 10 taona lasa izay tany amin'ireo firenena 50, dia fantatsika hoe iza amin'ireo setups dia misy dikany amin'ny resaka fahafinaretana sy fandidiana.
Ny vokatra azontsika dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fialam-boly, fampirantiana, fitsangatsanganana, fanamby farany amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany, ary valan-javaboary sns, fialamboly / fahafinaretana / fanatanjahan-tena / toerana fizahan-tany sy ny sisa. Fantatsika fa eny an-dàlana dia misy ny fahafahana sy ny fanamby, fifaninanana ary fiaraha-miasa. Nefa mino izahay fa ny fahalalana sy ny teknolojia vaovao dia handray anjara lehibe amin'ny làlan'ny fampandrosoana sy fanavaozana tsy tapaka,
azontsika antoka fa afaka manome ny vokatra mahay sy tsara inflatable isika, miorina amin'ny mpiasa efa za-draharaha, milina mandroso ary rafitra fanaraha-maso tsara kalitao.
Mifandraisa aminay dia mahazo ny famolavolana afaka
Notsaboina manokana amin'ny tranobe misy inflatable sy fanavaozana ny zaridaina mitsingevana. Izahay dia manolotra fomba amam-panao isan-karazany toy ny loko, habe, fomba, fananganana endrika, asa, pirinty, sns miaraka amin'ny SGS, CE, UL ary fanamarinana matihanina hafa momba ny fitaovana sy ny vokatra.